Lizothethwa ngo-Ephreli icala elibhekene nowe-ANC | News24
Lizothethwa ngo-Ephreli icala elibhekene nowe-ANC
Johannesburg - Ikhansela le-ANC, elalisekomidini lezindlu kuMkhandlu waseGoli, uDan Bovu, kanye nomunye ayesebenzisana naye, bazovela enkantolo ngo-Ephreli ngezinsolo zokukhwabanisa nenkohlakalo, kusho uMeya uHerman Mashaba ngoLwesihlanu.
Icala lizothethwa eNkantolo yamaCala eMali eGoli kusukela ngo-Ephreli 13 ngemuva kokuba abasolwa bezinikele kwabomthetho ngenyanga edlule.
UBovu no-Isaac Mhlongo basolwa ngokuzama ukudayisa umhlaba wedolobha ngokungemthetho.
OLUNYE UDABA: Igwetshiwe indoda eyadlwengula isalukazi isikhombe ngomkhonto
"Kuyangijabulisa ukubona inqubekelaphambili ngecala, kwazise besekunesikhathi eside kuthulekile ngalo,” kusho uMashaba.
"Kwafakwa isiphakamiso emkhandlini ngoSepthemba 2017. Isiphakamiso sasigunyaza mina ukuba ngicele i-NPA inginikeze izizathu zokuthi kungani kunqatshiwe ukuba icala liyiswe enkantolo, nakuba ubufakazi obuqinile bukhona.
"Ngenhlanhla i-NPA yavumelana nesicelo somkhandlu, yathatha isinyathelo ukuqinisekisa ukuthi uBovu uyabhekana necala enkantolo.”